जेबिल्स फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण
वर्गीकरण : वित्त कम्पनी
पछिल्लो व्यापार मूल्य : रू. २०१
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्य : रू. २०४
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्य : रू. ११३
१८० दिनको औसत व्यापार मूल्य : रू. १५०.८७
अध्यक्ष : विनोदकुमार मानन्धर
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : लक्ष्मीलाल नकर्मी
कम्पनीको अन्तिम त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा रू. ४ करोड ७३ लाख पुगेको छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको रू. ८० करोड चुक्ता पूँजी पु¥याउन कम्पनीले पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १९ प्रतिशत र तेस्रो वर्ष १४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने र मर्जरमा जाने योजनामा उल्लेख छ
- आरएसआई ओभरबट जोन (७२ दशमलव ९४ स्केल)मा छ । खरीद चाप बढेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन (८ दशमलव शून्य ७) बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : अल्पकालीन (७ दिने) रेखा र २१ दिने रेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य २१ दिने रेखा र ७ दिने औसत रेखाभन्दा माथि र ट्रेण्ड लाइन भन्दा तल छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय ८१ मो टेवा पाउने देखिन्छ । मूल्य महँगिएमा रू. २ सय ४ मा प्रतरोध पाउन सक्छ ।
- अन्तिम त्रैमासमा खुद नाफा ३ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ । सञ्चालन नाफा करीब ३ गुणा बढ्नाले र खुद ब्याज आम्दानी २६ दशमलव ३७ प्रतिशत बढ्नाले खुद नाफा बढेको हो ।
- कर्मचारी खर्च १० दशमलव ९३ प्रतिशत, अन्य सञ्चालन खर्च १ प्रतिशत र कुल सञ्चालन आम्दानी १९ दशमलव ९८ प्रतिशत बढेकोे छ ।
- ब्याज आम्दानी १६ दशमलव ४६ प्रतिशत बढेर रू. ११ करोड ७१ लाख र ब्याज खर्च १० दशमलव ३० प्रतिशत बढेर रू. ६ करोड ८४ लाख पुगेकोे छ ।
- चुक्ता पूँजीको तुलनामा खुद नाफा २० दशमलव ७६ प्रतिशतबाट बढेर २१ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
- निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ९७ प्रतिशत र सीडी रेशियो ७० दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।
- तरलता अनुपात ३८ प्रतिशत छ । कम्पनीको चौथो विवरणमा उल्लेख भएअनुसार पीई रेशियो ५ गुणा रहेको छ । गत असार मसान्तसम्म विगत १२ महीनाको आम्दानीका आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ५१ रहेको छ । सो आम्दानी र शेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्यको आधारमा निकालिएको पीई रेशियो ९ गुणा मात्र छ ।